तराईमा स्ट्रबेरी खेती! - Everest Dainik - News from Nepal
तराईमा स्ट्रबेरी खेती!
भैरहवाः तराईमा स्ट्रबेरी खेती सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ तर रुपन्देही, भैरहवामा एक जनाले स्ट्रबेरी खेती सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी एग्रो फार्मका प्रमुख आशा गुरुङले रोपेको बिरुवामा अहिले स्ट्रबेरी लटरम्म फलेको छ । गत वर्ष परीक्षणका रूपमा लगाइएको स्ट्रबेरीले सन्तोषजनक उत्पादन दिन थालेपछि यस वर्ष व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेको गुरुङले बताइन् ।
युरोपमा उत्पादन भएको र यहाँ उत्पादन भएको स्ट्रबेरीको फलको रङ, आकार र स्वादमा कुनै फरक नरहेको उनले बताइन् । लुम्बिनी अर्गानिक फार्मले यस वर्षको पहिलो मौसममा चार हजार पाँच सय स्ट्रबेरीका बिरुवा रोपेको गुरुङ बताउँछन् । आफ्नै ठाउँको उत्पादन त्यसमा पनि अर्गानिक स्ट्रबेरी पाउँदा भैरहवावासीले ताजा फलको स्वाद पाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस एकै अस्पतालबाट कोरोना जितेर २५ जना डिस्चार्ज, घर फर्किन पाउँदा खुसीले नाचगान
बिरुवा रोपेको दुई महिनापछि फल दिन सुरु गर्ने स्ट्रबेरीले पाँच महिनासम्म निरन्तर फल दिइरहन्छ । ‘एक बिरुवाबाट करिब दुई किलोसम्म फल लिन सकिन्छ’ गुरुङले भनिन् । यो मौसममा कम्तीमा आठ टन (आठ हजार किलो) बराबरको फल फल्ने आशा गरिएको उनले बताइन् ।
स्ट्रबेरी विशेषगरी पहाडी इलाका तथा चिसो ठाउँमा फल्ने फल हो । तराईको जिल्लामा उत्पादन गर्न मुस्किल पर्छ कि भनेर यसअघि परीक्षणका लागि मात्र रोपिएको गुरुङको भनाइ छ । विश्वमा जापानबाट उत्पादन सुरु गरिएको यस फललाई ८ घण्टासम्म नियमित घाम तथा बढीमा १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ । ‘सुरुआती चरण भएकाले माग अनुसारको पूर्ति गर्न सकिएको छैन, ठूला स्टोरहरूले धेरै माग गरेका छन् भने व्यक्तिगत रूपमा पनि स्ट्रबेरीको माग बढिरहेको छ, दिनमै १५–२० किलोको अर्डर आइरहेको छ’ उनले भनिन् ।
याे पनि पढ्नुस अब समुद्रको आनन्द लिन विदेश जानु पर्दैन, भैरहवामै बन्यो स्वर्गीय आनन्द दिने समुद्र!
अहिले बिरुवा भारतको पुनाबाट मगाइएको छ । एउटा बिरुवा खरिद गर्दा १४ रुपैयाँ नेपाली परेको छ ।
आगामी दिनमा भने यसै फार्मबाट बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यो फलको स्वाद अन्य फलको भन्दा छुट्टै र मिठो हुने भएकाले जो कोहीले पनि यसलाई सजिलै मन पराउन सक्छन् । फार्मबाट उत्पादन सुरु भइसकेको र भैरहवाका विभिन्न पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, फलफूल पसल तथा सुपरमार्केटहरूमा पनि यही फर्मको फल पाउन सकिने उनले जानकारी दिइन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
याे पनि पढ्नुस भैरहवामा बोराले च्यापिएर ४ जनाको मृत्यु
ट्याग्स: आशा गुरुङ, भैरहवा, लुम्बिनी एग्रो फार्म, स्ट्रबेरी खेती